Rashford Oo Muddo Labbo Sanno Ah Ku Cayaaraya Xanuun – Waa Maxay Xanuunkaasi? – Garsoore Sports
Rashford Oo Muddo…
Xiddiga kooxda Manchester United Marcus Rashford ayaan cayaar cayaarin gabi ahaanba xanuun la’aan laba sano gudahood, sida ay ilo wareedyo u sheegeen warbaahinta.
Weeraryahankan xirfadlaha ah ayaa maareynaya dhibaatooyin kasoo gaaray garabka iyo cagaha laakiin waxaa ka go’an inuu diyaar u noqdo xulkiisa Ingiriiska si uu uga qeyb galo Koobka Qaramada Yurub xagaaga.
Rashford ayaa 264 kulan u saftay Man United tan iyo markii uu kulankiisii ugu horeeyay u ciyaaray isaga oo da’yar ah sannadkii 2016-kii laakiin inkasta oo uu la tacaalayay dhaawacyo badan labadii sano ee la soo dhaafay, 23 jirkaan ayaa kaliya hal waqti oo dheeri ah ka maqnaa garoomada, markii uu seegay 14 kulan. sababtoo ah waxaa uu la tacaalayay dhibaato dhabarka ah xilli ciyaareedkii hore.
Ilo wareedyo ayaa u sheegay ESPN inuu dooran karo qalliin looga sameeyo garabka kaddib marka uu ka soo muuqdo xulka Ingiriiska koobka Qaramada Yurub Kaddib, laakiin wuxuu u u sheegay tababare Gareth Southgate inuu diyaar u noqon doono tartankan, oo bilaabmi doona bisha June.
Dhaawac cagta ah ayaa kasoo gaaray kulankii FA Cup ee ay kooxduisa guuldarrada 3-1 kasoo gaartay kooxda Leicester ka hor fasaxa xulalka islamarkaana ku qasabtay inuu ka baxo xulka Ingiriiska ee isreebreebka Koobka Adduunka la ciyaaraya San Marino, Albania iyo Poland.
Si taxaddar leh ayaa loo maareeynayay dhaawiciisa inta u dhexeysa tanniyo billoowgii ololahan waxaana la filayaa inuu taxaddar kale oo dheeri ah muujiyo inta ka harsan xilli-cayaareedka.
Marcus Rashford Waxa uu kusoo bilowday 7 ka mid ah sagaalkii kulan ee ugu dambeysay ee United laakiin ma uusan awoodin inuu dhameystirto 90 daqiiqo tan iyo guushii 1-0 ay ka gaareen West Ham bishii Maarso 14keedii taasoo ay kasoo wareegtay hal bil.